विकासको कुरा गर्दा हामी सड़क नभएको ठाउँ मा सड़क, पुल नभएको ठाउँमा पुल, बिजुली नभएको ठाउँ मा बिजुली को कल्पना गर्छौं। भाषा को सन्दर्भ मा त्यो के हो? देशमा विकास हुँदै जाँदा नेपाली बाहेक सबै भाषा लोप हुने भनेको हो कि के हो? अहिलेको शासक वर्ग को व्यवहार ले त्यस्तै सन्देश दि राखेको छ। जब कि यथार्थ त्यसको उल्टो छ।
सांस्कृतिक महत्व मात्र होइन, राजनीतिक न्याय र समानता मात्र होइन, तथ्यगत र आर्थिक कारण हरुले गर्दा पनि एक भाषा को नीति छोड्नुपर्ने हुन्छ। भने पछि खुट्टा घिसारने काम किन हुँदैछ?
जसरी पंचायत काल मा एउटा पञ्चे वर्ग को हालीमुहाली थियो तर पंचायत ढले सँगै त्यो ढल्यो, एउटा नया वर्ग आयो, काँग्रेस र वाम पृष्ठभूमि का मानिस सामुन्ने आये। त्यसै गरी एकात्मक व्यवस्था सँगै यी साढ़े तीन पार्टी ढाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यिन लाई फालेर मधेसी जनजाति देशको नया शासक वर्ग बन्नु जरुरी छ। देशलाई निकास पाउने त्यसरी हो। वार्ता होइन क्रांति।
ashok rai Constituent assembly constitution federalism Hridayesh Tripathi Madhesh madhesi madhesi kranti3Nepal Rajendra Mahato Terai Upendra Yadav